Ndị na -emepụta ụlọ na China ndị na -ehicha ụlọ IVEN
Maka ụlọ ọgwụ, bayoloji, ahụike, ụlọ ọrụ mmepụta ihe ọkụ eletrik.
Ọdịnaya Sistemụ Ime ụlọ dị ọcha
Ọdịdị ụlọ dị ọcha na ịchọ mma
Sistemụ mgbidi mgbidi nwere ike gbada agbada bụ ọgbọ ọhụrụ nke ihe ngwọta mgbidi dị ọcha nke ịdị ọcha anyị mepụtara. A na -eji ihe owuwu oghere pụrụ iche na usoro njikọta modulu na -eduga na ụlọ ọrụ na biomedical, elektrọnik na mpaghara ndị ọzọ.
Sistemu ikuku ikuku
Sistemụ ikuku ikuku dị ọcha nke IVEN na -eji ihe dị elu, yana ihe ngosi Siemens, valvụ, na ọwa ikuku nwere HUAMEI rọba nwere aluminom iji hụ na mkpuchi siri ike na arụmọrụ akara. Ka ọ dị ugbu a, ndị otu nwụnye IVEN nwere ahụmịhe nrụnye ihe karịrị afọ 15, na -edobe nka nrụnye zuru oke.
Ngwa ikuku oyibo (AHU)
Iji mezie ike ịchekwa na arụmọrụ dị elu, IVEN na -elekọta nke ọma maka imepụta ezigbo ọnọdụ ikuku maka onye ahịa. Anyị na -ahọrọ McQuay, TICA AHU, TRANE Chiller, wdg dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị.
Sistemụ ikuku ikuku ikuku
1. pipeline Steam ụlọ ọrụ
3.Philled pipeline mmiri
4. pipeline ime ụlọ ikuku
5.Capensation mmiri pipeline
Egwuregwu eletriki & ọkụ
Ngwa ọrụ ime ụlọ dị ọcha IVEN nwere ụdị ọkụ dị ọcha ahaziri iche na ngbanwe Siemens metụtara ya, nkeji ọkụ eletrik Schneider.
Sistemụ Njikwa akpaaka AC
1.PVC Ala: France Gerflor, LG
2.Epoxy floor: 4mm Epoxy Floor na-agbada onwe ya
Uru sistemụ ime ụlọ dị ọcha IVEN
1. Jiri okpokoro Sanwichi kacha mma nwere ihe BAO Steel.
2. Anyị nwere ike chepụta ma rụọ ọrụ ụlọ dị ọcha
3.IVEN na -ejikarị akụkụ igodo akara mba ụwa TOP, dị ka Siemens, Schneider, Camfil, McQual, TRAIN na ndị ọzọ.
4. Karịrị afọ 15, ọrụ 25 gụnyere ahụmịhe ọrụ obodo USA na nka nrụnye.
Nwụnye Project na Commissioning otu
Nke gara aga: Nrụpụta Mmepụta Ntaneti Turnkey Project
Osote: Usoro ọgwụgwọ mmiri mmiri RO
Disposable ntụtụ & agịga Production Line, Igwe Ampoule À Coudre Led, Igwe eji emejuola agịga, Igwe Ampoule À Coudre Singer, Igwe Njuputa Ejuju Ejupụtara, Ampoule Machine À Coudre Bernina,